““တကယ်မွှေးမှာလား ကံ့ကော်မြေ””	Posted by oakkarkoko on January 20, 2013
““ကန်ရေပြင် မြေနီလမ်း… တို့နဲ့ဝေး… စွယ်တော်ခုံပြာတန်း တို့နဲ့ဝေး… ယုံပါကွာ အချစ်ဆုံး မင်းကို… တို့တော့သတိရနေမှာပါ….. ” လွန်ခဲ့သည့် ခြောက်ဆယ်စုနှစ်များက ကျောင်းဖွင့်ချိန် ဇွန်လမှာ မိုးစက်များ ခပ်ဖွဲဖွဲရွာနေလိမ့်မည်။ စိန်ပန်းတွေ လည်း ခပ်ရဲရဲပွင့်နေလိမ့်မည်။ အဓိပတိလမ်းမကြီးတစ်လျှောက် ထီးရောင်စုံကိုယ်စီဖြင့် အဆင်အသွေးစုံကျောင်းသား ကျောင်းသူများ ပျားပန်းခတ်နေလိမ့်မည်။ ဒီလမ်းမကြီးကို ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားစွာ ခြေချခဲ့ကြလိမ့်မည်။
““ကြင်နာသူတွေရဲ့ ကံ့ကော်တန်း… ခြေရာထင်ကျန်ဆဲ အဓိပတိလမ်း…. ရင်မှာသံမှိုစွဲနှလုံးအိမ်ထဲ… တို့တော့သတိရနေမှာပါ…. ””
← ““ဘိုင့် ဘိုင် ချက်ကြီး””	““အိပ်မက်၏ အခြားတစ်ဖက်ကို ကျော်ဖြတ်ခြင်း””(ပထမပိုင်း) →	LeaveaReply Cancel reply	Enter your comment here...